Lammaa Magarsaa, Shimallis Abdiisaa: Jijjiirraa kaabinootaafi dhiibbaa siyaasaa - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Social Media
Ministirri Muummee Abiyyi Ahmad erga gara aangootti dhufanii fooyya'iinsi siyaasaa biyyattii keessatti uumamus kaabinoonni bakkaa kaafamuu, kaan bakka buufamuu fi naannoleerraa gara federaalaatti akksumammoo federaalarraa gara naannoo aanga'oota jijijjiiruun bal'inaan mul'ata.
Ministirri Muummee Abiyyi Ahmad wayita kaabinoota isaanii muudamaaf dhiyeessanii turan namni kamuu waanti raawwatee fi galmaan ga'e ilaalameetu bakka sana tura yookiin ni geggeeffama jedhanii turan.
Gama biraan ilaalcha tokkorratti walii galuurratti paartilee ADWUI uuman gidduutti rincicuun ture kaabinoota jijijjiiruuf akka sababaatti eerama.
Guyyaa kaleessaas, jechuun Kamisa bultii 18, bara 2019 muudamni haaraan sadarkaa nannoo Oromiyaattis ta'e federaalaatti geggeeffameera.
Muudama hoggantoota haarawaa Oromiyaatti
Muudama dubartootaa irratti namoonni maal jedhu?
Maalumaafuu jijjiiramni sadarkaa biyyaatti adeemsifame kun maal akeeka, jijjiirama kana gochuun maaf barbaachise, dhiibbaa akkamii ammoo qabaachuu danda'aan gaaffii namoota hedduuti.
Obbo Dajanee Tasammaa gaazexeessaadha, dhimma siyaasaa irratti barreessuufi dubbachuun beekamu.
Muudama har'aa attamiin ilaaltani jennee gaafanneerra.
''Obbo Gadduu Andaargaachoo Ministira Dhimma Alaa ta'uusaanii akka gaariittan ilaala. Nama tasgabbaa'aadha. Uummata walitti fiduuf nama hojjetaniidha. Obbo Lammaa fi Obbo Gadduun haala kanaan gara aangoo federaalaatti dhufuun kaabinee Ministira Muummee Abiyyi Ahmad ni cimsa jedheen yaada. Gama kanaan qaawwaan yoo jiraate jarri kun ulaa guddaadha cufu.'' jedhan.
Naannoo Oromiyaatti Pirezidaantii ta'uudhaan kan uummata biratti fudhatama guddaa argatan akkasumallee danbalii qabsoo uummataa gurmaa'ina garee Lammaa ykn Team Lammaa jedhu jalatti qindeessuun kan hoggananii siyaasa biyyattii karaa qajeelchuu keessatti qooda guddaa qaban Obbo Lammaa Magarsaa naannoorraa kaafamuun yaaddoo uummaa kan jedhurratti ''Obbo Lammaan Pirezdaantii naannoorraa ka'uunsaanii homaa rakkoo qaba jedhee hin yaadu.
Wayita qabsoon uumataa cimee turetti fuuldura dhaabbatanii hoogganuun jijjiirama fidaniiru.''
Lammaa Magarsaa Ministira Ittisa Biyyaa ta'uun muudaman
''Garuu waggaa tokko kana keessatti erga Ministirri Muummee gara aangootti dhufanii Obbo Lammaan akka duraanii warraaqanii waanti hojjetan hin jiru.
Dhimma dhuunfaatiinis yeroosaanii irra jireessaan hojii federaalaaf kennanii ta'uu danda'a. Ministira Muummee Abiyy Ahamad garagaaraa turan.''
Kanaafuu jedhan Obbo Dajaneen achii ka'uunsaanii gaaffii uuma jedhee hin yaadu. Inumaa namni dhufu irruma caalaa kaka'umsa argatee maaliinan caalaatti fudhatama argadha jedhee yoo carraaqe caalaayyuu hojjeta jedheen yaada.'' jedhan.
Akkuma biyyaattis jijjiiramoonni namoonni hin eegne hedduun dhiyeenya raawwatamaniiru.
Pirezidantiin Naannoo Amaaraa aangoorraa kaafamaniiru, Ministirri Dhimma Alaa Worqinee Gabayyoos bakkaa kaafamaniiru, ammammoo Pirezidaantiin Naannoo Oromiyaa naannoorraa gara Federaalaatti fidamaniiru, dabalataanis ministiroota bakkaa jijjiiruun dafee dafee raawwata. Kun maaliif ta'a, dhiibbaa akkamiis qabaata jennee gaafanneerra.
''Kanarratti wanti beekamuu qabu Ministirri Muummee Abiyyi abbaadhuma fedhan akka fedhanitti fuudhanii bakka tokko kaawwachuu hin danda'an. Dhaabbileetu nama isaanii dhiyeeffatu. Kanaafuu kan dhaabbileen dhiyeeffatan keessaati kan filatamu. Dadanqamni paartiiwwan keessa jiruyyuu dafanii nama kaasuu kanaaf sababa ta'a. Qaamuma jijjiirama ta'ee fudhatamuu danda'a.''
Jijjiirama ammaan tana naannoleerrattis ta'e sadarkaa federaalaatti taasifame booda siyaasa biyyattii keessatti jijjiiramni eegamu jiraachuu malaa? jennees gaafanneerra.
''Hojii amma hojjetameen gara caalaa jijjiiramni Oromiyaa keessatti ta'uu mala. Obbo Shimallis kan amma aangootti dhufan qaawwa waggaa tokko kana keessa ture irratti hojjechuu danda'u.
Gaaffiin uummata Oromoo ammallee kan hin deebine hedduudha. Gaaffileen Uumata Oromoo hedduun isaanii Oromiyaama keessatti kan deebi'aniidha. Federaala geessuu kan hin barbaanne hedduutu jiru.
Keessattuu waa'een saamicha lafaa, hoji dhabdummaa fi OPDO keessatti jijjiirama fiduu isaan ijoodha. '' jedhan
''Kana booda rakkina caasaa komachuun ulfaataadha''
OPDOn maqaa gara ODPtti jijjiirrachuurraa kan hafe hin jijjiirame. Jijjiiramni jalqabuu kan qabu dabballoota biyya saamaa fi nama ajjeesaa turan kan harkisaanii dhiigaan faalame yoo adabuun dadhabamellee uumata duraa achi qabuun barbaachisaadha. Caasaan akkanaa gandarraa qabee akka geeddaramu gochuudha.
Ta'uu baannaan Obbo Lammaan deemuun yookiin Obbo Shimallis dhufuun uumata kanaaf homaa hiikaa hin qabu jedhu Obbo Dajanee Tasammaa.
Obbo Lammaan ammoo bakka deeman sanatti yoo karaa waraanaallee ta'uu karaa bulchiinsaa waa hedduu jijjiiruu danda'u. Sababni isaa caasaan bulchiinsaa sun kan ijaarame sirna duraan ture kan ABUT tiksuuf malee akka uummatootaaf ta'utti hin turre.
Karaa Obbo Gadduutiin garuu jijjiirama guddaa hin eegu. Sabani isaas hojiin dippiloomaasii imaammatuma biyyattiin qabdu hojiirra oolchuudha. Walumaa galatti jijjiirama guddaa Oromiyaa keessattin eega. Jijjiiramni Oromiyaa keessatti dhufu jijjiirama gara biraafiyyuu bu'uura ta'a jedhan.
19 Ebla 2018
Muudama dubartootaa: hanna balaaleffachuufi madaallii hawaasaa eeguuf gahee olaanaa qabaata
Ministira Muummee: ''Osoo isa hin ajjeesin nu miliqe humnoonni jedhan turan''